Degdeg:- Askari katirsan AMISOM oo askar kale ku dhex dilay gudaha Xerada Xalane iyo Xog cusub oo la helay.
May 13, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 0
Wargeeyska Daily monitor ee kasoo baxa Wadanka Uganda ayaa daabacay in Askar ka tirsan ciidanka AMISOM ay ku dhinteen muran dhexdooda ah oo ka dhacay arunta ay ku leeyihiin Magaaladda Muqdisho.
Ciidanku waxaa ay baarayaan waxa keenay in mid ka mid ah Askarta uu Muqdisho ku dilo Taliyihiisii kahor inta uusan isagu is dilin, ayuu daabacay Wargeeysku.
Ilo-wareed Muqdisho kusugan ayuu Wargeeysku kasoo xigtay in Askariga uu ka careeysiiyay Taliyihiisu kadibna uu dilay Afar Askari oo uu isagu ku jiro Sabtigii Todobaadkan.
Afayeenka Ciidanka Uganda Richard Karemire ayaa sheegay in Labo Askari oo kaliya ay waxyeelo soo gaartay, hadana uu socdo baaritaan ku aadan in la ogaado waxa Askariga falka uu sameeyay ku dhiiri geliayay.
“Waxa ku riixay wali lama oga. Waxaan dooneeynaa in aan ogaano in uu waalna iyo in kale” ayuu yiri Richard Karemire.
Toogashadu waxaa ay ka dhacday Saldhigga ugu weeyn ee Ciidanka AMISOM ay Soomaaliya ku leeyihiin, gaar ahaan meel ay joogaan Ciidanka ka socda Dalka Uganda oo ah dalka ay Soomaaliya ka joogaan ciidanka ugu badan.
Ilo-xog-ogaal ah ayaa sheegay in muranka togashadda keenay uu ka dhashay kadib markii uu askarigu diiday in uu howlgal u aado Barawe, kadibna uu rasaasta ku furay taliyihii ay murmeen iyo Askar la joogtay isagu uu isdilay.
Wali lama siideyn aqoonsiyadda ragga dhintay, laakiin waa wax aan badneeyn in dalka Banaankiisa iyo dibaddiisa ay Ciidanka Uganda isku dilaan, sida uu daabacay Wargeeyska Daily Monitor.
Waxaa joogto ka ahayd Soomaaliya oo in Ciidanka AMISOM ee Howlgalka u jooga Soomaaliya ay toogtaan ma ay dilan Dadka Shacab ka ah.
Majiro war rasmi ah oo kasoo baxay Howlgalka oo kusaabsan toogashadda ka dhacday Xalane.